Waftiga oo lagu doo dhoweeyey Jaamacada Latrobe.
Dhollowaa iyo waftiga
Waftiga iyo gudiga maktabada LaTrobe University
Waftigii Kasocdey Waxbarashada Puntland iyo Jaamacada Boosaaso oo Siweyn Loogu Soo Dhoweeyey Australia
SomaliTalk.com | Melbourne, Australia | Aug 23, 2003
Waftiga oo uu soo dhoweeyey madaxa School of Law Legal Studies.
Wasiirka iyo waftiga EAU oo hadiyad bixinaya
Waftiga oo lagu soo dhoweeyey garoonka Melbourn Airbort
Waftiga oo lagu soo dhoweeyey guriga la dejiyey
Qado sharaftii waftiga loo sameeyey ee LaTrobe University
.Waftiga iyo gudiga maktabada (Library) jaamacada Latrobe oo wada xaajoonaya
Waxaa ayaamahanba ku sugal magaalada Melbourne ee dalka Australia wefti ka socda Wasaarada Waxbarshada ee Dawlada Goboleedka Puntland iyo Jaamacada Bariga Africa (East Africa University). Weftigaas oo ka kooban sadex ruux waxaa hogaaminaya Wasiirka Wasaarada Waxbarshada Mudane Hassan Dhiilood. Weftiga qaybtiisa Jamacada Bariga Afrika-na waxaa ay kala yihiin Cabdiweli Geyre oo ah hormuudka kulliyada dhaqaalaha iyo ganacsiga (Dean of School of Business and administeration-ka) iyo Cabdirisaaq Sheekh Maxamud Shoole oo hormoodka qaybta maamulka (admission)-ka iyo diiwaangelinta.
Weftiga oo hawlohooda rasmiga ah u bilaabay maalintii Arbcada ahayd waxaa ay la kulmeen masuuliyiin ka tirsan xarumaha waxbarshada ee jaamacadaha. Maalintii arbacada ahayd waxaa weftigu ay booqdeen Jaamacada La Trobe University oo ay wadda hadal galeen masuuliyiin sar sare oo jaamacada ka socda. Wax kasta oo ay ka wadda hadleena waa laysku af gartay, waxaana laga ogolaada arimihii ay u tageen jamacada oo dhan.
Wasiirka waxbarshada ayaa masuuliyiinta qaybo ka mid ah u fidiyey in ay soo booqdaan dhulka Somaliya, khaasatan degaanka Puntland, waana ay ka aqbaleen. Waxaana la rajaynayaa in wefti jaamacada ka socdaa tago Puntland sida ugu dhakhsaha badan ee socdaalka weftiga u suurta gelinayaa. Waxaa iyana masuuliyiin jaamacada ka socdaa ugu baaqeen Wasiirka in uu soo diro hal qof oo ka socda Jaamacada East Africa University si ay u baraan qofkaas aqoonta dejinta manhajka. Qofkaasna waxaa dhaqaalaha uu Australia ku joogaya balan qaaday gudoomiyaha Somali Community in Victoria Inc., Mudane Cabdiraxmaan Jamac Cusmaan Raas oo ka mid ahaa wufuuda la shireysey masuuliyiintaas sar sare.
Maalintii Khamiista ahayd waxaa weftigu booqasho ku tageen fasalka uu dhigo Ciise Maxamud Dhollowaa oo isagu Jaamacada ka ah kal kaaliye macalin, isla markaasna ka samaynaya shahaadada ugu saraysa ee PhD. Fasalka oo qaadanaya maadada mageceeda la yiraahdo GLOBALISATION: The Rise of the Modern World. Masuuliyiinta Jaamacada East Africa University ayaa aad u danaynayey in ay ogaadaan sida loo qorshayo xiisadaha afka Ingriisiga lagu yiraahdo Tutorial.
Weftigu waxaa ay soo booqanayaan xarumaha lagu hayo caruuraha Somaliya laga keeno ee uu soo qaado Ciise Maxamud Dhollowaa. Waxaana ay u kuur gelidoona arimaha la xiriira xanaanayntooda iyo hayntoodaba.
Asbuuca soo socda waxaa weftigaasi booqan doona Jaamacado kale oo ku yaala magaaladan Melbourne, si ay ugu kuur galan habka waxbarida ee jaamacadahaas, si ay uga bartaan inta ay ka qaadankaraan ee suurta galka ka ah dalka Soomaaliya.